မြန်မာ့အားကစားလောက ယခုထက်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မြင့်မားရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
Home > မြန်မာ့အားကစားလောက ယခုထက်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မြင့်မားရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ( ၁၃ )ရက်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲရုံ(၁)သုဝဏ္ဏ၌ မြန်မာ့အားကစားလောက ယခုထက်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မြင့်မားရေးအတွက် မြန်မာနို်င်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
.ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသည် အားကစားကဏ္ဍပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အထူးအရေးကြီးကြောင်း၊
- ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အားကစားအဖွဲ့ချုပ်များ အရှိန်အဟုန်မြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊
- ထူးချွန်ထက်မြက်သော မျိုးဆက်သစ် အားကစားသမားများ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ပြည်တွင်း အားကစားပြိုင်ပွဲများကို ပိုမိုကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေး၊
- ပြည်ပအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ပိုမိုပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးနှင့် အနိုင်ရရှိရေး၊
- အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံကျောင်းများတွင် မျိုးဆက်သစ်အားကစားသမားများကို ရွေးချယ်စုဆောင်မှု၊ မွေးမြူလေ့ကျင့်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ပိုမို စနစ်ကျကောင်းမွန်စေရေး၊
- အာဆီယံအဆင့် ၊ အာရှအဆင့်၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် အောင်မြင်မှုရရှိသော အားကစားသမားများကိုအားပေးချီး​မြှောက်ရေးနှင့်
- ဝန်ကြီးဌာနမှ အားကစားအဖွဲ့ချုပ်များအား မည်ကဲ့သို့ ပံ့ပိုးစေလိုသည်များကို သိရှိနိုင်ရေးတို့ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တက်ရောက်လာကြသူများအားလုံးက ပွင့်လင်းစွာဖြင့် ဆွေးနွေးအကြံပြုကြစေလိုကြောင်း၊
.(၂ဝ၁၈)ခုနှစ် ၊ မတ်လအတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ့အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသား အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲ (National Sports Seminar) မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော အကြံပြုဆွေးနွေးချက်များသည် အလွန်အကျိုးရှိ အဖိုးတန်ကြောင်း နှင့်
.အဆိုပါ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက်အဖွဲ့ငယ်များဖွဲ့၍ အသေးစိတ်ထပ်မံဆွေးနွေး၍ မည်သူက မည်သည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြမည်ကို တိတိကျကျသတ်မှတ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
.အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံကျောင်းများတွင်မျိုးဆက်သစ်အားကစားသမားများကို စတင် ရွေးချယ်စုဆောင်းစဉ်ကတည်းက အရည်အချင်းရှိသော အလားအလာရှိသော လူငယ်များကို စုဆောင်း၍ ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းရေးသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ကြံ့ခိုင်ကျန်းမာစေရေး သိပ္ပံနည်းကျ အားကစားနည်းပညာ (Sports Science) ဖြင့်လေ့ကျင့်မွေးမြူရန်လိုအပ်ကြောင်း၊
.အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံကျောင်းများ၏ လက်ရှိသင်ကြားလေ့ကျင့်မှုပုံစံများ ၊ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံများ၊ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ လေ့လာဆန်းစစ်မှုစနစ်များနှင့် နည်းပြများ၏ အရည်အချင်း မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ပြင်ဆင်သင့်သည်များကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊
. ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အားကစားသမားများ လေ့ကျင့်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ရန်နှင့် အောင်မြင်မှုများပိုမို ရရှိစေရန်အတွက် အထူးအရေးကြီးသည့် အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များကို အထူး အလေးထား၍ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စီမံချက်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊
. ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန အတွက် ဘဏ္ဍာငွေများပိုမိုတိုးမြှင့်ချထားပေးလျက်ရှိပြီး အားကစားကဏ္ဍ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ပံ့ပိုးမှုများဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
.ပြည်တွင်းအားကစားပွဲများပြုလုပ်ရာတွင် ပြည်သူများပိုမို စိတ်ဝင်စားမှုရရှိ၍ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ် များပိုမိုများပြားစေရေးအတွက် ပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပုံစံနှင့် နေရာမှ စ၍ လိုအပ်သည်များပြုပြင်လုပ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊
.ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အာဆီယံအဆင့် ၊ အာရှအဆင့်၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် အောင်မြင်မှုရရှိသောအားကစားသမားများ၏ ဘဝအာမခံရရှိရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အလိုက် ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားပေးရေး လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
. အားကစားအောင်မြင်မှုများရရှိသည့် နိုင်ငံများတွင် မည်ကဲ့သို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည်ဆိုသည်များကို သိရှိရန်နှင့် အတုယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အင်တာနက်စာမျက်နှာများ မှတဆင့် အမြဲတမ်းလေ့လာသုံးသပ်ဆောင်ရွက်နေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
. အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် အောင်နိုင်ရေးအတွက်သာမကဘဲ တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးပြီးကြံ့ခိုင်စေရေး (National Fitness ) အတွက် ''ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဆေးတစ်ပါး'' ဆောင်ပုဒ် နှင့် ပြည်သူများကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေရန်နှင့် လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အားကစားအဖွဲ့ချုပ်များမှ လည်း တတ်နိုင်သမျှ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊
.အားကစားလောက ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမျိုးသားအားကစားမူဝါဒ (National Sports Policy) တစ်ရပ် ချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်လျက်ရှိနေကြောင်း၊
.အဆိုပါ အမျိုးသားအားကစားမူဝါဒသည် အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒ၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေး မူဝါဒများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိရန် လိုအပ်ပြီး ဟန်ချက်ညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လည်းအထူးအရေးကြီးကြောင်း၊
. ယခုတွေ့ဆုံပွဲမှ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များကို အလေးအနက်ထား၍ လက်တွေ့အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ကာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အဆင့်လိုက် ၊ အပိုင်းလိုက် အတတ်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက မြန်မာ့အားကစားလောက ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲ နှင့် စိန်ခေါ်မှုများ ဝန်ကြီးဌာနမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးစေလိုသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် အကြံပြုချက်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးကျော်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနား ကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယ ပညာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ် (၄၅)ဖွဲ့မှ ဥက္ကဌများ၊ ဒုဥက္ဌကများ၊ အတွင်းရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Source URL: http://spedmyanmar.gov.mm/content/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80-%E1%80%9A%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%91%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%96%E1%80%BD%E1%80%B6%E1%80%B7%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%BA-%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA